रोकिएको एन्फा निर्वाचन कहिले ?
मकवानपुर । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को चैत १४ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको छ । एन्फाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको जनाएको छ । बिहीबार ललितपुर उच्च अदालतले निर्वाचन तत्कालका लागि रोक्न दिएको आदेशको सम्मान गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निर्वाचन स्थगित गरेको एन्फाले उल्लेख गरेको छ ।...
बालक खोजीमा मकवानपुर प्रहरीले सहयोग नगरेको गुनासो
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ कर्राका चौध वर्षिय बालक मिङ्मा वाइवा फागुन अन्तिमबाट बेपत्ता बने । उनी कहाँ छन् र के गर्दैछन् भन्नेमा उनको परिवारमा यतिबेला चिन्ता छ । गत फागुन २९ गते विद्यालय जान्छु भनेर घरबाट हिडेका उनी हालसम्म घर फर्किएनन् । आफ्नो छोराको खोजीमा सघाउनका लागि उनका बाबु ज्ञानबहादुरले सहयोगीहरुमा आग्रह...
‘कलानाथ अधिकारीः व्यक्ति र कृति’ हेटौँडामा लोकार्पण
मकवानपुर । साहित्यकार तथा लेखक ह्याग्रीब आचार्यद्वारा लिखित पुस्तक ‘कलानाथ अधिकारीः व्यक्ति र कृति’ हेटौँडामा लोकार्पण गरिएको छ। वरिष्ठ साहित्यकार तुल्सी थापा, कलानाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालकी संरक्षक विश्वकान्ति कलावती सुमार्गी, अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी र लेखक आचार्यले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरेका हुन्। कवि, गायक तथा...
यसरी हुदैछ एमाले-माओवादी पार्टी एकता
एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि गठन गरिएका दुबै कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन थालेका छन्। बैशाख अगावै पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिने गरी प्रतिवेदन निर्माणलाई तीब्रता दिन तयारी भइरहेको दुबै पार्टीका नेताहरुले जानकारी दिएका छन्। कार्यदलले एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन २५ फागुनसम्मको समय दिएको थियो। तर, दुबै...
सरकार विभिन्न समिती किन बनाउदै छ ?
काठमाडौँ । सरकारले महत्वपूर्ण विषयहरुमाथि छलफल गर्न र योजना तय गर्न राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक पूर्वाधार र विधेयक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार यो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारराज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चारकर्मीहरुसँग जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेशको राजस्व संकलनसम्बन्धी...
प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा नै हो : प्रचण्ड
मकवानपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौंडा नै स्थायी हुने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर मकवानपुरले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेशको १३ जिल्लामध्ये राजधानीका लागि हेटौंडा नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थान रहेकाले बाहिर प्रचारमा आए जस्तो यहाँबाट प्रदेशको...
प्रदेश सरकारले बनाउने भयो हेटौंडा काठमाडौ सुरुङमार्ग
मकवानपुर । प्रदेश नंबर ३ सरकारको प्राथमिकतामा हेटौँडा–काठमाण्डौँ सुरुङमार्ग र हेटौँडाको वडा नंबर १६ मा रहेका स्र्पोट्स एकेडेमी (रंगशाला) पर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि घोषणा गर्ने बजेटमा सुरुङमार्ग तथा रंगशालालाई प्राथमिकतामा राख्ने मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले जानकारी दिएका छन् । प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट...
मकवानपुरका क्रसरलाई यस्तो कडा नियम !
मकवानपुर। क्रसर उद्योगहरुले विकास आयोजनाको नाममा मकवानपुरका बिभिन्न खोलामा जारी राखेको अबैध उत्खनन् बन्द हुने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा सोमबार भएको सर्बपक्षीय बैठकले एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने काम मंगलबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । जिसस मकवानपुरका सभापति रघुनाथ खुलालले नदी उत्खनन्मा ब्यापक...
नेपाल आइडलको सिजन २ मा किन गरियो यस्तो निर्णय
काठमाडौं । नेपाल आइडलले दोस्रो सिजनमा विजेता हुने आइडललाई गाडी उपहार नदिने भएको छ । पहिलो संस्करणमा बीस लाख पुरस्कार र गाडी उपहार राखेको आइडलले अब भने गाडी हटाएर पचास लाख दिने निर्णय गरेको हो । केही दिनअघि पहिलो नेपाल आइडल बनेको बुद्ध लामाले महेन्द्रा केयूभी १०० गाडी उपहारमा पाएका थिए तर कर बापत तिर्नुपर्ने रकम नतिर्दा उनले अझै गाडी...